ယောင်္ကျားတွေရဲ့ဘ၀မှာလည်း အားကိုးလောက် စရာ မိန်းမမျိုး လိုအပ်တယ်ယောင်္ကျားတွေရဲ့ဘ၀မှာလည်း အားကိုးလောက် စရာ မိန်းမမျိုး လိုအပ်တယ်
“ယောင်္ကျားတွေရဲ့ဘ၀မှာလည်း အားကိုးလောက်စရာ မိန်းမမျိုး လိုအပ်တယ် “ဘယ်ယောင်္ကျားမှတော့ ..မိန်းမတစ်ယောက်ကို အားကိုးမှီတွယ်ဖို့ဆိုပြီး မယူတတ်ကြပါဘူး ဒါပေမယ့် .. အဲဒီယောင်္ကျားရဲ့ဘ၀မှာ စီးပွားရေး ၊ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေး အခက်အခဲ တွေ .. ကြုံရတဲ့ အခါသူတို့ကို ...
မချစ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသုံးပြီး လှည့်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေမိတဲ့သူက ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပါပဲမချစ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသုံးပြီး လှည့်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေမိတဲ့သူက ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပါပဲ
ကျွန်မလဲ ငိုမနေချင်တော့ဘူး …မချစ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသုံးပြီး လှည့်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေမိတဲ့သူက ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပါပဲ …ဒါပေမယ့် မျက်ရည်တွေတော့ ကျနေမိတယ် ။ တကယ်ဆို ကျွန်မလဲ ငိုမနေချင်တော့ဘူး ။ နာကျင်ရလွန်းလို့သာ လွှတ်ချလိုက်ဖို့တွေးတာပါ ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်မ သံယောဇဥ်တွေ ...
တီ တီ တာ တာ စ ကား လုံး လေး တွေ နဲ့ချွဲ နွဲ့ တတ် တဲ့ မိန်း မ မျိုး မ ဟုတ် ဘူး …..ပြော စ ရာ ရှိ ရင် ချန် မ ထား ပဲတီ တီ တာ တာ စ ကား လုံး လေး တွေ နဲ့ချွဲ နွဲ့ တတ် တဲ့ မိန်း မ မျိုး မ ဟုတ် ဘူး …..ပြော စ ရာ ရှိ ရင် ချန် မ ထား ပဲ
” မိန်း မ တော့ မိန်း မ ပဲ . . . ” တီ တီ တာ တာ စ ကား လုံး လေး တွေ နဲ့ချွဲ ...
ယခုလို ရာသီဥတု ပူပြင်းချိန်မှာ ကားအဲကွန်းဖွင့်စီးသူများ မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ့် အချက် (၃) ချက်ယခုလို ရာသီဥတု ပူပြင်းချိန်မှာ ကားအဲကွန်းဖွင့်စီးသူများ မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ့် အချက် (၃) ချက်
အဲယားကွန်း(Aircon)သည် အခန်းတွင်းအပူချိန်ကို စုပ်ယူလျှော့ချပေးသည့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ပေါ်ခါစက နေအိမ်တိုက်ခန်းများအတွက်သာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှစကာ ကားများတွင်ပါ အဲယားကွန်းတပ်ဆင် အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ဇိမ်ခံဆလွန်းကားများ၊ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရသော ကားအကောင်းစားများတွင်သာ ...
ဥမ္မာဒန္ဒီ ဘာလှူခဲ့လို့ လှတာလဲ ???ဥမ္မာဒန္ဒီ ဘာလှူခဲ့လို့ လှတာလဲ ???
ဥမ္မာဒန္ဒီ ဘာလှူခဲ့လို့ လှတာလဲ ဗာရာနသီပြည် ဆင်းရဲမိသားစုမှ မွေးဖွားလာသောဆင်းရဲသူမလေးတစ်ယောက်သည်တစ်နေ့ပွဲသဘင်နေ့မှာချမ်းသာကြွယ်ဝသော အမျိုးသမီး တွေ ဝတ်ဆင်တဲ့ဝတ်ပန်းဖြင့် ဆိုးအပ်သော အဝတ် ကိုဝတ်ဆင်သည်ကိုမြင်သောအခါ _ သူဆင်းရဲမလေးလည်းသူရဲ့မိဘ များကို ထို အဝတ် မျိုး ဝတ်ချင်ကြောင်းကို မိဘ ...
နိုင်ငံခြားမှ စွက်ဖက်မှုများကို လျှပ်တပျက်တုန့်ပြန်မည်ဟု ပူတင်သတိပေးနိုင်ငံခြားမှ စွက်ဖက်မှုများကို လျှပ်တပျက်တုန့်ပြန်မည်ဟု ပူတင်သတိပေး
ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့် မည်သည့်နိုင်ငံမဆို လျှပ်တပျက်တုန့်ပြန်မှုကို ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ရုရှားသမ္မတပူတင်က သတိပေးလိုက်သည်။ “ကျွန်တော်တို့မှာ ဘယ်သူမှထုတ်မကြွားနိုင်တဲ့ လက်နက်ကိရိယာတွေရှိတယ်… ဒါတွေကို လိုအပ်ရင်ထုတ်သုံးမှာဖြစ်တယ်”ဟုလည်း သူကပြောသည်။ ယင်းတို့မှာ အများက တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံများနှင့် နျူကလိယားလက်နက်များဟု ထင်မြင်ယူဆနေသော အရာများဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သူကပြောသည်။ ...
အင်ဒိုနီးရှားက စားအုန်းဆီ ပြည်ပတင်ပို့မှု ပိတ်ပင်ခြင်းအစီအစဉ် စတင်အင်ဒိုနီးရှားက စားအုန်းဆီ ပြည်ပတင်ပို့မှု ပိတ်ပင်ခြင်းအစီအစဉ် စတင်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ စားအုန်းဆီတင်ပို့မှု ပိတ်ပင်ချက် ကြာသပတေးနေ့(ဧပြီ ၂၈) မှာ စတင်လိုက်ပြီး ဆီကြမ်းနဲ့ သန့်စင်ပြီးဆီထုတ်ကုန်တွေ ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးဝန်ကြီး အယ်လန်ဂါ ဟာတာတိုက ပြောဆိုပါတယ်။ မူဝါဒအရ ထုတ်ကုန်အားလုံး အကျူံးဝင်မှာဖြစ်ပြီး စားအုန်းဆီကြမ်း၊ သန့်စင်ပြီး ...